Fango mifototra amin'ny typography 25 | Famoronana an-tserasera
Fango 25 miorina amin'ny typography
Tokony hiaiky aho fa raha mila mijoro ny tenako dia ataoko bebe kokoa amin'ny logo noho ny aza misy typography, saingy tsy manelingelina ahy ny hiaiky fa misy ny logo mifototra amin'ny typography izay mahavariana sy hoderaina.
Raha manam-potoana malalaka hampiofanana ianao dia afaka manandrana manao a logo, ary amin'ity fomba ity dia ho hitanao ny fahasarotan'ity karazana endrika ity, satria tsy maintsy mandefa zavatra maro amin'ny litera vitsivitsy fotsiny isika nefa tsy misy ny fanampian'ny singa ivelany.
Aorian'ny fitsambikina dia avelako ho anao ity fanangonana mahafinaritra ity. Tena mamporisika azy aho.
tsy hita maso
valo ambin'ny folo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Logos » Fango 25 miorina amin'ny typography
Dokam-barotra manan-karena dia hoy izy:
fanangonana lehibe. Tena manome aingam-panahy, misaotra
Mamaly an'i Ricapublicidad
Boky an-tserasera 12 maimaimpoana momba ny famolavolana sy ny fampandrosoana amin'ny Internet
Borosy ravina voajanahary 12